Izindaba - Inqubo Yokukhiqiza Yenkampani Yethu
Ukukhiqizwa kwe-Pulp ebunjiwe ejwayelekile kubandakanya ukulungiselela uginindela, ukubumba, ukomisa, ukucindezela okushisayo nezinye izinqubo.
1. Ukulungiselela uginindela
Ukudonsa kufaka phakathi izinyathelo ezintathu zokudonswa kwempahla eluhlaza, ukugaywa nokugaywa. Okokuqala, i-fiber eyinhloko ifakwa ku-pulper ngemuva kokuhlolwa nokuhlukaniswa. Khona-ke uginindela uyashaywa, bese i-fiber ihlukaniswa ne-pulper ukuthuthukisa amandla okubopha phakathi kwemikhiqizo ebunjiwe yempuphu. Ngoba ubukhulu besilinganiso, ubulukhuni nombala kwehlukile, ngokuvamile kudingeka ukwengeza i-ejenti yamandla emanzi, i-ejenti yokulinganisa nezinye izithasiselo zamakhemikhali, futhi ulungise usayizi wenani lokuhlushwa ne-pH.
Okwamanje, inqubo yethu uginindela udini iyona cleaner ukwakha indlela. Ukwakhiwa komshini kuyinqubo lapho okufa okuphansi kucwiliswa echibini le-slurry futhi imicu echibini le-slurry ifakwa ngokufana ebusweni ngokucindezelwa futhi okufa okuphezulu kuvaliwe. Sifakwe umshini wokubumba ophindayo, ofaneleka kakhulu ekukhiqizeni usayizi omkhulu nezimfuneko zokucaciswa, kudiliza izidingo zokuphakama zemikhiqizo ejulile yephepha nemikhiqizo yepulasitiki.
Imikhiqizo yengcindezi eyomile idinga ukomiswa, imvamisa kusetshenziswa ukomiswa kwephaseji lokomiswa nokomiswa kwefilimu. Inkampani yethu isebenzisa indawo yokomisa ukomisa. Okuqukethwe komswakama wombungu omanzi obunjiwe ungafinyelela ku-50% ~ 75%, ngemuva kokuthi isikhunta esezansi simuncwe futhi sihlanganiswe nesikhunta esiphezulu, bese singancishiselwa ku-10% ~ 12% ngemuva kokumiswa. Imikhiqizo yengcindezi emanzi ngokuvamile ayidingi ukoma.
4. Ukucindezela okushisayo
Ngemuva kokuthi imikhiqizo yokubumba ugwayi seyiphothuliwe, bese icindezelwa ngokushisa okuphezulu kanye nengcindezi enkulu yokwenza imikhiqizo yokubumba uginindela ihlangane kakhudlwana, izakhiwo ezingcono zemishini, futhi yenze umumo nosayizi wokushisa komkhiqizo, umfaniswano wobukhulu bodonga, bushelelezi futhi bushelelezi indawo engaphandle. Inqubo yokubumba ngokuvamile isebenzisa ukushisa okuphezulu kwesikhunta (ngokuvamile i-180 ~ 250 ℃) kanye nomfutho ophakeme wokucindezela ukubumba uginindela ngemuva kokumiswa, futhi isikhathi esishisayo sokucindezela ngokuvamile singama-30-60s.
5. Ukucheba nokuqeda
Ngemuva kokuphela kokucindezela okushisayo, umkhiqizo uzonqunywa ukuthola umkhiqizo ophelile. Ngemuva kokucheba, eminye imikhiqizo izocutshungulwa ekusetshenzisweni kokuthunyelwe ngokuya ngesidingo samakhasimende, njengokuphrintwa kwephedi, ukugudluza njalo njalo.
6. Ukuhlola nokupakisha
Ngemuva kokuphothulwa kwazo zonke izinyathelo zokukhiqiza nokucubungula, sinabasebenzi abangochwepheshe bokulawula ikhwalithi yokuhlola imikhiqizo, ngokuya ngezidingo zamakhasimende, ukuqeda eminye imikhiqizo engafanelekile. Ekugcineni ukuhlangabezana nezidingo zokupakisha kokukhiqiza.
Pulp Cup Umnikazi, Udayi Umthoyi Tray, Izimonyo Mf Box, Ukudaya Ukusonga Umtfumbu Holder, Ibhokisi Lokupakisha Ukudla, Ukupakisha Ukupakisha Kwekhadibhodi,